Daryeelka Ilkaha - Xarunta Caafimaadka ee Lancaster Daryeelka Ilkaha - Xarunta Caafimaadka ee Lancaster
Marxalad kasta oo nolosha ah waxaan isku dhafanaa jirka, maskaxda, iyo qalbiga annaga oo bixinna daryeelka aasaasiga ah, daryeelka ilkaha, caafimaadka dabeecadda, iyo adeegyada bulshada iyada oo loo marayo xiriir soo dhaweynaya, xoojiya, oo ka caawiya kor u qaadista bulshada. Horumarkeena kooxaha daryeelka si taxaddar leh u daryeela bukaannadooda una yimaadda bulshadeena leh khibrado u gaar ah iyo sooyaal dhaqamo kala duwan.
Si aad u sameysato ballan ballan dhakhtar oo deg-deg ah ama ka-hortag ah, fadlan wac 717-299-6371. Wixii ahmiyada degdega ah ee ilkaha ama caafimaadka saacadaha shaqada ka dib, wac 717-299-6371 si aad ulahadasho bixiyaha wicitaanka. Haddii ay jirto xaalad degdeg ah oo nafta halis gelisa, fadlan wac 911.
Adeegyadayada ilkaha waxaa ka mid ah:
Imtixaannada (* Hadda uma qaadanayaan bukaanno cusub imtixaannada)
Prophylaxis / nadiifinta (* Waqtiga xaadirka ah uma qaadaneyno bukaanno cusub nadiifin)
Kanaalka xididka hore
Barnaamijka Dhoola-caddeynta Caafimaadka
Booqashada Smiles Healthy waxay qoysaska siisaa fursad ay ku darsadaan booqashada ilkaha ee carruurtooda 5 sano jirta iyo wixii ka yar inta lagu guda jiro booqashada caafimaad. Booqashooyinka deg-degga ah, raaxada leh, iyo kuwa is-dhexgalka leh waxaa ka mid ah baaritaanka ilkaha, nadiifinta, iyo foloraydh varnish oo ay ku jiraan Nadaafadda Caafimaadka Ilkaha Dadweynaha. Bukaannada aan lahayn caymiska ilkaha ayaa laga yaabaa inay xaq u yeeshaan annaga Barnaamijka Qiime dhimista.
Wac 717-299-6371 si aad jadwal ugu sameysato booqashada dhoola caafimaadeed ama weydii daryeel bixiyahaaga in lagu arko booqashada dhoola caafimaadeedka caafimaadka leh haddii aad ballan caafimaad oo qoys leedahay.
OCR Ogaysiinta eexasho la'aanta
»Xarunta Caafimaadka ee loo yaqaan 'Lancaster Health Center' waxay adeecdaa sharciyada xuquuqda madaniga ah ee federaaliga mana kalasooc ku saleysan jinsi, midab, asal qaran, da ', naafo, ama jinsi.
»Xarunta Caafimaadka ee Lancaster cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no Discina por ተነሳos de raza, midab, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
»Ogeysiis luqado kale ah.